Apple dia handefa ny beta voalohany amin'ny firmware an'ny AirPods Pro | Avy amin'ny mac aho
Tsy ho ela dia handefa ny beta voalohany an'ny firmware an'ny AirPods Pro i Apple
Toni Cortes | 11/06/2021 14:00 | Accessories
Sambany hatramin'izay i Apple no mamoaka ny rindrambaiko AirPods ao dingana beta mba hitsapana ny mpamorona. Vaovao iray manontolo.
Toy ny hoe lozisialy io dia nitatitra i Apple androany fa afaka andro vitsivitsy dia hamoaka ny beta voalohany an'ny firmware ho an'ny headphone Apple izy. Manokana, ho an'ny AirPods Pro. Ny orinasa dia te-hahazo antoka fa tsy hisy bibikely alohan'ny hamoahana ny kinova farany ho an'ny mpampiasa rehetra. Tena zava-baovao ity, tsy isalasalana.
Tamin'ny famelabelarana tamin'ny Alatsinainy lasa teo Tim Cook ary ny ekipany dia nanazava taminay ny zava-baovao manaraka izay hampiharina amin'ny fitaovana Apple amin'ity taona ity, manavao ny rindrambaiko. Ary toy ny efa mampahafantatra izahay Andro vitsy lasa izay, ny AirPods dia hahazo fanatsarana lehibe koa amin'ny firmware vaovao.
Ary hitan'i Apple fa mety tokony hosedraina tsara ireo fanatsarana ireo alohan'ny hamoahana rindrambaiko ho an'ny mpampiasa rehetra. Ka toy ny rindrambaiko hafa dia hamoaka rindrambaiko beta AirPods Pro ho an'ny mpamorona afaka andro vitsivitsy. Ho ilay voalohany avelao izy hanao izany.
Io dia hahafahana mampivoatra endrika vaovao ao amin'ny iOS sy macOS ho an'ny AirPods, ary hahafahana manasongadina fiasa vaovao hampiharina amin'ny ho avy, ao anatin'izany ny Mampiroborobo ny resaka (fananganana feo meh) ary Fihenan'ny tabataban'ny tontolo iainana (famonoana tabataba).
Tsy nanome daty hanaovana fanombohana toy izany ny orinasa, ary miresaka momba ny AirPods Pro ihany, ka tsy mazava na ho omena ho an'ny AirPods sy ny AirPods Max. Tsy maintsy miandry vaovao bebe kokoa isika amin'ity lafiny ity.
Mazava ho azy, ireo fiasa vaovao rehetra ireo dia hatambatra amin'ireo fanavaozana mifanaraka aminy iOS 15, iPadOS 15ary macOS Monterey, izy rehetra dia efa natomboka tamin'ny dingana beta hatramin'ny alatsinainy lasa teo ho an'ny mpamorona Apple rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Tsy ho ela dia handefa ny beta voalohany an'ny firmware an'ny AirPods Pro i Apple
Ahoana ny fametrahana ny macOS Monterey developer beta